ယူနိုက်တက် ကစားသမား သုံးဦးအထိ ပါဝင်နေခဲ့တဲ့ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ အမြန်ဆုံး ကစားသမား 10 ဦး - SPORTS MYANMAR
ယူနိုက်တက် ကစားသမား သုံးဦးအထိ ပါဝင်နေခဲ့တဲ့ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ အမြန်ဆုံး ကစားသမား 10 ဦး
By Edi Tor July 30, 2020
ဒီနေ့ မှာတော့ opta က 2019 – 20 ခုနှစ် အတွက် ပရီးမီးယား လိဂ်ရဲ့ တစ်နှစ်တာ အမြန်ဆုံး ကစားသမား စာရင်းကို ထုတ်ပြန် ကြေငြာခဲ့လိုက်ရာမှာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းမှ ကစားသမား သုံးဦး အထိ ပါဝင် ခဲ့ကြတာကို တွေ့မြင် ခဲ့ရ ပါတယ် ။
အဆိုပါ ယူနိုက်တက် ကစားသမား သုံးဦး ကတော့ ညာ နောက်ခံလူ ဝမ် ဘစ်ဆာကာ ၊ တိုက်စစ် ကစားသမားလေး မေဆွန် ဂရင်းဝုဒ် နဲ့ ကွင်းလယ်လူ ဖရက်ဒ် တို့ပဲ ဖြစ်ကြ ပါတယ် ။ ဒီ စာရင်း မှာတော့ မန်စီးတီး အသင်း ရဲ့ ညာ နောက်ခံလူ ကိုင်လီ ဝေါ်လ်ကာ က နံပါတ် တစ် ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒီ စာရင်း ထဲမှာတော့ ယူနိုက်တက် အသင်း တို့ရဲ့ အမြန်ဆုံး ကစားသမား သုံးဦး ဖြစ်တဲ့ ရပ်ရှ်ဖို့ ၊ မာရှယ် နဲ့ ဒန်နီယ် ဂျိမ်းစ် တို့ မပါဝင် ခဲ့ပဲ ဖရက်ဒ် ပါဝင် ခဲ့ခြင်း က အနည်းငယ် ထူးဆန်း နေခဲ့ရ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အလုံးစုံကို ခြုံကြည့် လိုက်တဲ့ အခါ မှာတော့ ဖရက်ဒ်က ပျမ်းမျှ တစ်နာရီ 23.17 မိုင်နှုန်း လျင်မြန် နေခဲ့ ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ နောက်ထပ် ကစားသမား နှစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ မေဆွန် ဂရင်းဝုဒ် နဲ့ ဝမ် ဘစ်ဆာကာ တို့ကတော့ ပျမ်းမျှ တစ်နာရီ 23.36 မိုင် အထိ ပြေးလွှား နိုင်ခဲ့ ကြပြီး အက်စတွန် ဗီလာ ကြယ်ပွင့် ထရီဇီဂွတ်ဇ် နဲ့ အတူ အဆင့်3နေရာမှာ ပူးတွဲ ရပ်တည် နိုင်ခဲ့ကြ ပါတယ် ။
အဆိုပါ ကစားသမား 10 ဦး စာရင်း မှာတော့ မန်စီးတီး ကြယ်ပွင့် ဖီးလ် ဖိုဒန် ၊ ဆောက်သမ်တန် တိုက်စစ်မှူး ရှိန်းလောင်း ၊ အာဆင်နယ် လူငယ်လေး မိတ်လန် နိုင်းလ် ၊ လက်စတာ စီးတီး အသင်း ရဲ့ ဗဟို နောက်ခံလူ ကတ်ဂလာ ဆိုယွန်ကူ တို့လည်း ပါဝင် ခဲ့ကြ ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် ဝုလ်ဗ် အသင်း ရဲ့ မြန်နှုန်းမြင့်တဲ့ တောင်ပံ တိုက်စစ် ကစားသမား ဖြစ်သူ အဒမာ ထရာအိုရေး ကတော့ ကိုင်လီ ဝေါ်လ်ကာ ရဲ့ အနောက်မှာ ဒုတိယ အဖြစ် ရပ်တည် နေခဲ့ ပါတယ် ။ ဝေါ်လ်ကာ ကတော့ ပျမ်းမျှ တစ်နာရီ 23/49 မိုင်နဲ့ အမြန်ဆုံး ပြေးလွှား ကစားနိုင်သူ ဖြစ်ခဲ့ရ ပါတယ် ။
ဒီထဲမှာတော့ ဆိုးလ်ရှား ရဲ့ အမြန်ဆုံး ကစားသမား အဖြစ် သတ်မှတ် ခံရတဲ့ ရပ်ရှ်ဖို့ နဲ့ ဂျိမ်းစ် တို့ မပါဝင် နိုင်ခဲ့ကြ ပါဘူး ။ ဒီဇင်ဘာ တုန်းက Opta မှ ထုတ်ပြန် ခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်း မှာတော့ ဖရက်ဒ် ဟာ သူတို့ နှစ်ဦးထက် မြန်နှုန်း ပိုမို မြင့်ခဲ့တာကို တွေ့ရှိ ခဲ့ရပါ သေးတယ် ။
ဒါပေမယ့် မတ်လ မှာတော့ ဂျိမ်းစ် နဲ့ ရပ်ရှ်ဖို့ တို့က ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ အမြန်ဆုံး ကစားသမားတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြ ပါတယ် ။ ဒီလို အနေအထား တစ်ရပ် မှာတော့ ဂရင်းဝုဒ် နဲ့ ဘစ်ဆာကာ တို့ဟာ သူတို့ နှစ်ဦး ကို ကျော်ဖြတ် နိုင်လိမ့်မယ် လို့ ထင်မှတ်ချင်စရာ မရှိခဲ့ ပါဘူး ။
ယူနိုက်တက် နည်းပြ ဆိုးလ်ရှား ကတော့ ကောင်တာ တိုက်စစ် ကစားဟန်ကို အသုံးပြုလေ့ ရှိတဲ့ သူ့ရဲ့ အသင်းမှာ ဒီလို မြန်နှုန်းမြင့် တိုက်စစ် ကစားသမားတွေ ရှိနေ ကြတာကို ပျော်ရွှင် နေမှာ အသေအချာ ပါပဲ ။ ပရီးမီးယားလိဂ် ရဲ့ မြန်နှုန်းမြင့် ကစားသမားတွေကို အစဉ်လိုက် ဖော်ပြ ပေးလိုက် ပါတယ် ။
1 ကိုင်လီ ဝေါ်လ်ကာ
2. အဒမာ ထရာအိုရေး
3. မေဆွန် ဂရင်းဝုဒ်
3. အာရွန် ဝမ် ဘစ်ဆာကာ
6. ကတ်ဂလာ ဆိုယွန်ကူ
7. အိန်စလေ မိတ်လန် နိုင်းလ်
10. ဖီးလ် ဖိုဒန်